Semalt: Plugins WordPress mila ilainao rehefa mamorona votoaty tsara
Wordpress dia tranonkala maromaro miaraka amin'ny fampiasana manerantany. Wordpress dia manana ampahefatry ny tranonkala manerantany. Ho an'ireo mpampiasa WordPress dia misy plugins maherin'ny 44.000 azonao atao ny mametraka azy. Ireo tranonkala Wordpress dia manana fahaiza-manao avo lenta noho ny fahasamihafan'ny rafi-pitenenana samihafa ampiasain'izy ireo. Betsaka ny raharaham-barotra no nahalala ny maha-zava-dehibe ny fanamafisana ny varotra amin'ny tranokala sy ny hetsika e-varotra mahomby - 6AV6645-0DB01-0AX0 SIEMENS.
Ross Barber, manam-pahaizana manokana avy amin'ny Semalt , no manome toky fa amin'ny fomba vaovao dikan-tsarimihetsika vaovao, ny famoronana votoaty dia tetika vaovao izay ampiasain'ny olona hametraka fampahalalana sarobidy ao amin'ny blaoginy sy tranonkala.
Ny famoronana votoaty dia lafiny manan-danja amin'ny mpitantana ny tranonkala. Ny ankamaroan'ny singa ao amin'ny tranonkala WordPress dia azo ampiasaina amin'ny fampiasana plugins sy fampivoarana ny fitaovana fampidiram-bidy. Na izany aza, ny famoronana votoaty dia lafiny iray hafa izay mitaky hetsika samihafa. Google dia nanambara fa ny manan-danja votoaty dia lafiny manan-danja izay manampy ireo tranokalam-pifandraisana amin'ny antony manokana. Ny lanjany sy ny kalitaon'ny lahatsoratra dia lafiny iray amin'ny famoronana vohikala. Zava-dehibe ny hampivelatra votoaty mamono izay afaka maika ny fizotran'ny tranokalanao. Misy plugins maro amin'ny WordPress azonao ampiasaina mba hamoronana votoaty mpamono olona. Farany, tokony ho azonao atao ny mamaritra izay WordPress plugin mifanandrify tsara indrindra amin'ny tranonkalanao.
Ity plugin ity dia manampy anao hanisa ny dika teny sy ny teny fototra. Izy io koa dia manampy amin'ny fanombanana ny famakafakana ny famakiana ny takelaka ho an'ny tranonkalanao. Ny Word Stats plugin dia ahafahan'ny olona mitantana bilaogy sy tranonkala eCommerce manao lahatahiry fanadihadiana momba ny linguistika, lafiny iray izay mamaritra ny maha-zava-dehibe ny lahatsoratrao. Azonao atao ny mampitombo ny tranokalan-tserasera amin'ny SERPs amin'ny fampiasana ity fitaovana ity. Ity fitaovana robot ity dia manana fampahalalana toy ny sary maneho ny valin'ny tenim-bolana isam-bolana, ireo hafatra izay tapaka ary ireo teny fanalahidy 20 avo indrindra. Olona maro no mandray soa amin'ny fampivoarana ny heriny amin'ny fampiasana ny teny fanalahidy ao anatin'ny lasik'izy ireo.
Ity fitaovana ity dia plugin fanatsaràna fikarohana (SEO). Manampy amin'ny fanatanterahana asa toy ny fanamarinana votoaty dika mitovy, fanamarinana ny plagiarism ary koa ny fitadiavana rohy tapaka. Ireo mpampiasa webmasters hafa dia mampiasa io fitaovana io mba hampitahana ny lanjan'ny teny fototra sy ny endrika fanatsarana ny karazana votoaty samihafa. Misy safidy amin'ny fanamarinana ny meta misy ny pejy web. Rehefa manomboka ny tranokala WordPress ianao dia mazava fa tsy misy plugin na extension afaka manampy anao amin'ny fampivoarana izany. Ny plugin SEO PrePost dia afaka manampy anao hanatsara ny kalitao ao amin'ny votoatinao izay mahatonga ny tranonkalanao mifandraika amin'ny mpihaino anao. Azonao atao ihany koa ny ahafahana manondro ny rohy tapaka ao amin'ny sehatry ny tranonkalanao.
Ity plugin ity no lehiben'ny mpitantana bilaogy. Azo atao ny mijery ny toerana rehetra misy azy ary manosika azy ireo any amin'ny faritra misy azy. Rehefa mamorona votoaty ao anaty tranokala ianao, dia mihinàna mihoatra noho izay mety hanadino ny fametrahana plugin amin'ny fitantanana ny tavoahangy bilaogy. Ny Kalandrien'ny fanontana dia afaka manampy anao hihazona tsy tapaka ny votoaty vaovao ho an'ny mpamaky anao. Ity plugin ity dia misintona sy manindry ireo singa izay afaka manampy anao hahazo ny sata mifototra amin'ny vilany tsirairay, hijerena ny hafatra rehetra ary koa ny fitantanana ireo lahatsoratra avy amin'ny mpanoratra hafa Source .